အာဏာခွဲဝေအုပ်ချူပ်ရေးဆိုတာ ဘာလဲ ? ဖယ်ဒရယ်စနစ်ဆိုတာ အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များနှင့်ပြည်ထောင်စုကြားအချိုးကျအာဏာခွဲဝေလျက် ယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်း Distribution of Powerဖြစ်တယ်။ အာဏာခွဲဝေခြင်းကို အသေးစိတ်ပြောရရင် ဖယ်ဒရယ်စနစ်မှာ ဗဟိုအစိုးရ သို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ နဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရဆိုပြီး အစိုးရနှစ်ရပ်ရှိမယ်။ ဒီနေရာမှာ ဗဟိုအစိုးရနဲ့ အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ် အစိုးရနှစ်လွှာကြားမှာရှိတဲ့ မူဝါဒ၊ သဘောတူညီချက်၊ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းချက်တွေကို အပြန်အလှန်စေ့စပ်ညှိနိုင်းပြီး အာဏာခွဲဝေအုပ်ချုပ်ခြင်းကို ဖယ်ဒရယ်စနစ်လိ
အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလေ့လာပြီး မငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုအဖြေရှာမယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများက သဘာဝအရဖြစ်ပြီး ရှောင်လွှဲလို့မရကြောင်း ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူတွေက ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီ ပဋိပက္ခနောက်ဆက်တွဲ မှာတော့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ၊အကြမ်းဖက်ပြီးဖြေရှင်းမှုတွေပါလာပြီး မငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ဖြစ်လာတတ်ကြပါတယ်။ဒီတော့ မငြိမ်းချမ်းမှုတွေကို လေ့လာပြီး အဖြေရှာနိုင်ဖို့ အကြမ်းဖက်မှုတွေအကြောင်းကို မဖြစ်မနေသိထားဖို့လိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေက သတိမထားမိတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိန
ဖက်ဒရယ်စနစ်၏ အားသာချက်၊အားနည်းချက်များကို သတိချပ်ကာ အနာဂါတ်ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရန် တိုင်းပြည်ပကတိအနေအထားနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီအမံများချမှတ်ခြင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းအမြစ်တွယ်နေသည့် လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး၊ကိုယ်ပိုင်စရိုက် လက္ခဏာများ အစရှိသည့်ခွဲခြားဖိနှိပ်မှုများ၊ တိုင်ပြည်အတွင်းရှိ နယ်မြေဒေသများအကြား အရင်းအမြစ်ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နိမ့်ကျကွာဟခြင်းအစရှိသည်တို့ကို ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းအဖြစ်ယူဆကာဖယ်ဒရယ်စနစ်အကောင်ထည်ဖော်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်မှာ လွတ်လပ်ရေးမရ
ဖက်ဒရယ်မိတ်ဆက် (Epi - 2)
ဖက်ဒရယ်မိတ်ဆက် အပိုင်း(၂) ဖက်ဒရယ်စနစ်တွင်တွေ့ရလေ့ရှိသော ယေဘုယျအခြေခံလက္ခဏာရပ်များ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအချို့တွင် တူညီတဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုပဲ ကျင့်သုံးကြပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ မူလအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီး ခြားနာကြပါသေးတယ်။ ဒီလိုခြားနားမှုတွေ ရှိပေမယ့် ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ယေဘုယျ ဘုံတူညီတဲ့လက္ခဏာတွေကို ဒီ ဖက်ဒရယ်မိတ်ဆက် ဆောင်းပါးအပိုင်းဆက်(၂) မှာ ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အစိုးရစနစ်တစ်ခုကို ဖက်ဒရယ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံလို့ အကြမ်းဖျင်း ကောက်ချက်ချမှတ်ယူနိုင်ဖို့
ဖက်ဒရယ်မိတ်ဆက် (Epi - 1)
ဖက်ဒရယ်မိတ်ဆက် အပိုင်း(၁) ဖက်ဒရယ်စနစ်၏စံတန်ဖိုးများနဲ့အခြေခံသဘောတရားများ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်မည်ဟုဆိုရာတွင် စနစ်တို့၏ သဘောသဘာဝအတိုင်း အာနည်းချက်နှင့် အားသာချက်များရှိသည့်အလျောက် ၎င်းတို့၏စံတန်ဖိုးများနှင့်အခြေခံသဘောတရားများကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချ ကျင့်သုံးနိုင်ရေးမှာ အင်မတန်မှအရေးကြီးလှပါတယ်။ အကြောင်းမှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ့ စံတန်ဖိုးများနဲ့ အခြေခံသဘောတရားများကို ကောင်းစွာလိုက်နာကျင့်သုံးမှုသည် တိုင်းပြည်တစ်ခု၏ အစိုးရယန္တရားကောင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်ခြင်းအပေါ် တိုက်ရိုက် အကျိုးသ
ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအချို့ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်များ ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာ အနည်းဆုံးအစိုးရနှစ်ရပ်ရှိတဲ့အလျောက် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ အခွန်ကောက်ခံတဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ခွဲဝေခြင်းတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေမှာ သဘောမတူညီနိုင်မှုတွေနဲ့ မပြီးပြတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ (zero-sum)လို့ဆိုနိုင်တဲ့ တစ်ဖက်က အမြတ်ရရှိနေချိန် တစ်ဖက်ကို နစ်နာစေတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့်ပဲ အဲ့ဒီလို ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အစိုးရ နှစ်ဖက်အကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး
ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် (Epi - 3)
ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် အပိုင်း(၃) အရေးပေါ်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားမလုပ်အောင် ဘယ်လိုအစီအမံတွေထားရှိသင့်လဲ။ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါး အပိုင်း(၂) မှာ “အိန္ဒိယနိုင်ငံ”ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ပါဝင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့ အရေးပေါ်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြဌာန်းထားရှိခြင်း အကြောင်းအရင်း (၂) ခုကိုဖော်ပြပြီးခဲ့ပါပြီ။ ဆောင်းပါးအပိုင်း(၂) မှာဖော်ပြခဲ့သလို ဖက်ဒရယ်အစိုးရကို ကြာ
ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် အပိုင်း(၂) အရေးပေါ်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ထားရှိခြင်း အကြောင်းရင်း(၂)ချက် ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါး အပိုင်း(၁)မှာတော့ အိန္ဒိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မှာ တရားဝင်ပြဌာန်းထားတဲ့ (ပုဒ်မ-၃၅၅/၃၅၆) တို့ကိုဖော်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပိုင်းအပိုင်း(၁)ကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်မှာ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “အိန္ဒိယနိုင်ငံ” ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်ဟာ ဖက်ဒရယ်အန
ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် (Epi - 1)
ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် အပိုင်း(၁) အိန္ဒိယဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (ပုဒ်မ-၃၅၅/၃၅၆) ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံအများစုမှာ ယူနစ်များ၊တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များရဲ့ အုပ်ချုပ်စီမံမှုမှာ ဖက်ဒရယ်အစိုးရအား ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ အဆိုပါ ပြည်နယ်တွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် တည်ငြိမ်စေရန်၊ လူ့အခွင့်အရေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ရန်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ကောင်းမွန်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအခြေခံစံနှုန်းများကို ထိန
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအားကောင်းလာရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။ အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုဆိုတာဘာလဲ။ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေးကိစ္စအဝဝနဲ့စပ်လျဉ်းလို့ လူထုကို အခြေမခံဘဲ ကိစ္စရပ်အားလုံးကို ဗဟိုကချုပ်ကိုင်ထားခြင်း၊ တစ်ပြည်ထောင်စနစ်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းလူအများစုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာပဲစုံလင်ကွဲပြားတဲ့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေကနေထိုင်ရင်းလူအများစုရဲ့ အာဏာရှင်စနစ် အမြဲဖြစ်သွားနိုင်တာကို သတိပြုရမယ်။ နောက်ထပ်စဉ်းစားစရာတစ်ခုက စွပ်ပြုတ်တစ်ခုကို ကြည့်ရအ
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေထဲက Sunrise clause ဆိုတဲ့ အစီအမံတစ်ရပ်ကို သင်သိပါသလား။ Sunrise Clause ဆိုတာကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံပြဌာန်းချက်တစ်ခုရဲ့ သက်ရောက်တဲ့ နေ့ရက်ကို နောင်လာမယ့်အနာဂတ်တစ်ခုအထိ ရွှေ့ဆိုင်းထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ မြင်သာအောင် အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ညီလာခံမှာ သဘောထားအကွဲလွဲဆုံးပြဿနာတစ်ခုကတော့ “ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ ရုံးသုံးဘာသာစကား” သတ်မှတ်ချက် တစ်နည်းပြောရရင် ဘာသာစကားဆိုင်ရာမူဝါဒပဲဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လ
ပဋိပက္ခတွေကို ကာကွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အဖြေ(သို့မဟုတ်) ဖက်ဒရယ် အပိုင်း(၂) အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု နဲ့ ဘာသာစကားမူဝါဒများ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတွေမှာ ဘာသာစကားမူဝါဒ နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အစီအမံချမှတ်ပုံတွေမှာ နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွဲပြားကြပါတယ်။ အချို့နိုင်ငံများမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲတွင် ဗဟိုအဆင့်နဲ့ ပြည်နယ်အဆင့်နှစ်ခုလုံးမှာထည့်သွင်းအကာအကွယ်အကွယ်ပေးထားပြီး တစ်ချို့နိုင်ငံများမှာတော့ အစိုးရတစ်ရပ်ရပ်ထံမှာ အခွင့်အာဏာပေးထားပါတယ်။တဖန် ဖက်ဒရယ်ဟုဆိုပေမယ့် လူနည်းစုဘာသာစကားရပိုင်ခွင့်တွေမှာ များစွာ
Conflict resolution (Epi - 1)
ပဋိပက္ခတွေကို ကာကွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အဖြေ (သို့မဟုတ်) ဖက်ဒရယ် အပိုင်း(၁) ဖက်ဒရယ်စနစ် နဲ့ ဘာသာစကားမူဝါဒများ ဖက်ဒရယ်စနစ်ဟာ နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ စုံလင်ကွဲပြားသော လူမျိုးစုများ၏ သက်ဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာအသီးသီးကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊အားပေးမြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို အာမခံချက်ပေးပြီး စည်းလုံးမှုကိုဖော်ဆောင်ပါတယ်။ မြင်သာတဲ့ ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင် ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအချို့မှာ စုံလင်ကွဲပြားတဲ့ ဘာသာစကား၊စာပေ၊ယဉ်ကျေးမှု၊သမိုင်းကြောင်း စတာတွေကို နိုင်ငံတော် ဗဟိုအဆင့်အင်စတီကျူးရှင်းများနဲ့ ဖွဲ့စည်းပု
Conflict resolution announcement
ပဋိပက္ခတွေကာကွယ် ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အဖြေတစ်ခု(သို့မဟုတ်) ဖက်ဒရယ် ဆောင်းပါးမိတ်ဆက် စစ်အေးခေတ်လွန်ကာလများမှစတင်ကာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ နယ်မြေဒေသကျယ်ပြန့်ပြီး စုံလင်ကွဲပြားတဲ့ လူ့မျိုးစုများစွာရှိသည့် နိုင်ငံတွေမှာ ဖက်ဒရယ်စနစ် ကျင့်သုံးပြီး ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ အခြေခံတဲ့ နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေအပါအဝင် အခြားသော ပဋိပက္ခများ မြင့်တက်လာမှုကို ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေများစွာရှိခဲ့ပ
မိုဘိုင်းဒေတာကို စနစ်တကျအသုံးပြုပြီး တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ကြမယ်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း စစ်ကောင်စီဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်မှ စတင်ပြီး Mobile Data တွေကို ယခင်စျေးထက် ၂ဆခန့် တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ သတင်းစီးဆင်းမှုကို ရပ်တန့်စေဖို့ ဖြစ်နိုင်သလို၊ သူတို့ကို ဆန့်ကျင်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ နည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Digital Strike မဖြစ်မြောက်စေဖို့ ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Wifi တပ်ဆင်ထားတဲ့သူတွေအတွက် ထူးခြားဖြစ်စဉ် မဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေအများစုက Mobile Data ကိုပဲ အဓိကထား အသုံးပြုကြတာပါ။ ဒါ့အပြင် အခြေခံ
တော်လှန်ရေးမှာ အနားယူရင်း အားဖြည့်ဖို့ ဒီအချက်တွေ လုပ်ကြည့်စို့။
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတူ ဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးခရီးမှာ တိုက်ပွဲဝင်လာတာ အခုဆို (၉) လကျော်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကာလအတွင်းမှာလည်း တော်လှန်ရေးကို မြန်စေချင်တယ်။ စစ်အာဏာရှင်ကြောင့် စိတ်ထိခိုက်ရသူတွေကို အကာအကွယ်ပေးချင်တယ်။ အားလုံးဆန္ဒကိုယ်စီ၊ မျှော်လင့်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ အားမလို၊ အားမရဖြစ်မိတာမျိုး အစရှိတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေလည်း ရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သဘာဝပါ။ သို့သော် ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေက တစ်ခါတစ်ရံ သင့်ကို စိတ်ပင်ပန်းစေမှာ၊ အားလျော့လာမယ့် စိတ်တွေဆီ မသိမသာခေါ်ဆောင်နေတာကို သတိချပ်ဖို့ လိ
တန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်းရမယ့် “မြန်မာ့ရိုးရာ ခြင်းလုံး ကစားနည်း”
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေလို့ ပြောလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ ထိပ်ဆုံး ပြေးမြင်ကြတာက ရိုးရာဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ အစားအသောက်နှင့် ပွဲလမ်းသဘင်တွေပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်တို့ မေ့လျော့နေသလို သတိမထား မိတာက “မြန်မာ့ရိုးရာ အားကစား” တွေပါ။ သမိုင်း အစဉ်အလာ ကြီးမားခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုး တွေဟာ အားကစားမှာလည်း ထူးချွန်ကြောင်း အားလုံး သိရှိကြမှာပါ။ သို့သော်လည်း မြန်မာ့ရိုးရာအားကစားအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြတဲ့ ကစားနည်းတွေအထဲမှာ ထင်ရှားတာတွေက ရိုးရာခြင်းလုံးနှင့် လက်ဝှေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ သ
ကျွန်တော်တို့ လူ့သဘာဝအရ သတင်းဦး၊သတင်းထူးတွေကို မျှဝေပေးချင်တာကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်ရော ဒီလို ကျရူံးသွားတဲ့ တော်လှန်ရေးပုံပြင်တွေ ထပ်မြင်တွေ့ရဖို့ ခံနိုင်ရည်ရှိသေးလား? "ကျွန်တော်တို့ ပထမက အပေါ်စီးကနေ တိုက်ခိုက်ပြီး အသာစီးရတာပေါ့။ နောက်ပိုင်းမှာ Video လေး တစ်ခု၊ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ခုကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ နေရာ သူတို့ ခန်မှန်းမိသွားပြီး ပြန်ပစ်တဲ့အနေအထားမှာ ကျွန်တော်တို့ လူတွေ မတောင့်ခံနိုင်တော့တဲ့အထိ ဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျ" " အာ့တစ်ပုံပဲ Only me ဖို့ ကျန်ခဲ့တာပါကွာ။ ဘယ်လိုယုံကြည
ကိုဗစ်ကာလနဲ့ တော်လှန်ရေးကာလနောက်ပိုင်း ကုန်စျေးနှုန်းတွေ အရမ်းတက်လာတယ် ၊အထူးသဖြင့် ဆီတွေ၊ဆားတွေ၊ဆန်တွေစျေးတက်လာပေမယ့် ကိုယ့်လုပ်အားနဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ အဆိုပါ ဆန်တွေကို တောင်သူလယ်သမားတွေ ထိုကာလများမတိုင်ခင်ထဲက နပ်မှန်အောင်မစားနိုင်ခဲ့ပါ။ အာဏာသိမ်းကာလနောက်ပိုင်း မီတာမဆောင်ရင် စစ်အာဏာရှင်က မီးဖြတ်မယ်လို့ချိန်းခြောက် ဖိအားပေးမှုတွေရှိလာပေမယ့် တောင်သူလယ်သမားတို့ ကျေးရွာမှာ ထိုကာလများမတိုင်ခင်ကတည်းက မီးမရရှိခဲ့ပါ။ ဒီလိုပဲ မိုဘိုင်းဒေတာတွေစျေးတက်တာတွေကလည်း တောင်သူ လယ်သမားမိသားစုအများစုအတ
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ကိုယ်ကိုကိုယ် ပြန်လည်ရှာဖွေမယ်။ မနက်ခင်းအိပ်ယာနိုးချိန်မှစလို့ အိပ်ယာဝင်ချိန်ထိ တူညီတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကိုပဲ ဖြတ်သန်းရင်း တစ်နေ့တာကို အဓိပ္ပါယ်မရှိသလို ခံစားနေရသူတစ်ယောက်လား။ တစ်ခါတစ်ရံ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေပေါ် မူတည်ပြီး ဘယ်သူကိုမှ မပြောပြဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားမလို၊ အားမရဖြစ်တဲ့စိတ်တွေ လူငယ်တွေရဲ့ ရင်ထဲ ကိန်းအောင်းနေလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ခံစားမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် “ သင့်အတွက် စိတ်ကျန်းမာရေး” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါး အပိုင်း (၁) မှတစ်ဆင့် ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ကိ